Onnachiiftuuwwan hojii maal fa'i beektu? - BBC News Afaan Oromoo
Kaampaniiwwanii fi manneen hojii gara garaa hojjettoota isaanii gammachiisuufi hojiirra tursuuf onnachiiftuwwan adda addaa kennuufi. Onnachiiftuuwwan kennaman keessaa gaggaariin isaan kami?
Eenyuun? 'Airbnb, Maccildowie'
Goodayyaa suuraa Hojjattootni bilisaan dawwannaaf akka imalan taasisa
Ameerikaa keessatti manneen jireenyaa fi meeshaalee kan kireessu Marsariitiin 'Airbnb' jedhamu hojjattoota isaatiif waggaatti durgoo hanga doolaara 2000 keennee hojjattootni dawwannaaf akka imalan taasisa. Wayita imalanis qabeenya kaampaanichi addunyaa irraa qabu kan fedhan keessa akka boqotan eeyyamaafi.
Kaampaniin kun onnachiiftuu imalaa hojjettoota isaatiin kennuun, kaampanii keessa hojjachuuf mijaataa ta'e kan bara 2016 jedhamee marsariitiiwwan kaampanota madaalaniin filatamee jira.
Roow Deviis gorsituu olaantuu dhaabbata qaccarrii UK 'Macildowie' jedhamuuti. Dhaabbanni kunis hojjettoota isaaf guyyaa ayyaanaa bilisaan kenna. Roow carraa kanatti fayyadamuun al-lama gara Niiwyoork, gara Laas Veegaas ammo al-afur imalteetti.
"Imala tokko ega deemtee booda isa itti aanu dhabu hin barbaaddu, kanaaf jettee cimtee hojjetta," jetti Roow.
Boqonnaa guyyaa ayyaanaa hin murtaa'iin
Enyuun? 'Netflix', 'LinkedIn' fi 'Virgin Management'
Goodayyaa suuraa Hojjetaan, har'a ayyaana jedhee waggaatti hanga barbaade hayyama fudhachuu danda'a.
Yaada boqonnaa ayyaana waggaa hin murtaa'iin kan fide kaampanii fiilmii 'Netflix' jedhamu dha. "Waggaatti boqonnaa guyyaa ayyaanaa meeqa akka kenninu seeras ta'e guca murteessu hin qabnu," jedhan marsariiti isaanii irratti.
Akkuma kana marsaan netwoorkiingii 'LinkedIn' "hojii isaanii si'oominaan akka hojjetaniif fayyada" jechuun hojjettoota isaaf guyyaa boqonnaa hin murtoofne kennaaf.
Kunis hojjettootarraa duubdeebii gaarii argachuu isaa dubbatti, daayireektarri humna namaa korporeeshinichaa Sharoon Poomeel.
Dhaabilee sadan kana keessatti hojjetaan, har'a ayyaana jedhee waggaatti hanga barbaade hayyama fudhachuu danda'a.
Ogeessi xiin-sammuu Dr. Tiraavis Biraadbeerii, "Bilisummaan akkasii namootni miira abbummaa fi itti gaafatamummaa cimaan akka itti dhagaahamuu fi inumaa boqonnaa tokkoyyuu osoo hin fudhatiin waggaa guutuu akka hojjetan gochuu danda'a," jedhu.
Eenyuun? 'Apple' fi 'Facebook'
Goodayyaa suuraa Dubartootni yeroo hojiirra jiran sirriitti hojjetanii, booda ijoollee horachuu akka danda'an
Kaampaniiwwan 'Apple' fi 'Facebook' ammoo dubartoota gara dhaabbilee teeknoolojiitti hawwachuuf furmaata kan jedhan yaada haaraa fidanii gadi bahan.
Hojjettootni dubartootaa hanqaaquu hormaataa isaanii kattanneessanii tursiisuu akka danda'aniif hanga doolaara kuma 20 kaffaluuf.
Kunis dubartootni yeroo hojiirra jiran sirriitti hojjetanii, booda ijoollee horachuu akka danda'aniif akka ta'e kaampaniin Aappil ibsa bara 2015 baaseen beeksisee ture.
Haa ta'u malee, dubartoonni akka maatii hin horanne taasisa jechuun mormiin guddaan isaan mudatee ture.
Saroota bakka hojii fidachuu
Goodayyaa suuraa 'Google' hojjettoonni saroota fudhatanii akka dhufan ni hayyama
Namoota saree hin jalannee fi alarjii gara garaa qabaniif gaarii ta'uu mala. Haa ta'u malee saroota bakka hojiitti of biraa qabaachuun hojiif nama daddammaqsa jedha hogganaan tokko.
Hojjattootni 'Google' hedduun saroota jaalatu. Kanaafis akka onnachiiftuutti saroota isaanii fidatanii bakka hoji akka dhufan ni hayyamamaafi.
Nuyi adurrees ni jaalanna garuu akka dhaabbataatti, nuyi dhaabbata sareeti, adurroonni gara dhaabbata keenyaa dhufan akka hin cunqurfamne kan jedhu qajeelfama ittiin bulmaata dhaabbatichaa irratti barreeffamee jira.
Ministiirri Dhimma Alaa Itoophiyaa dhiifama gaafate